वेस्ट इन्डिज ५० रन नपुग्दै अलआउट! | Hamro Khelkud
वेस्ट इन्डिज ५० रन नपुग्दै अलआउट!
एजेन्सी – इंग्ल्यान्डसँगको दोस्रो टी-२० खेलमा घरेलु टोली वेस्ट इन्डिजले १ सय ३७ रनले पराजित हुँदै लज्जास्पद हार बेहोरेको छ ।
इंग्ल्यान्डले प्रस्तुत गरेको १ सय ८३ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा वेस्ट इन्डिज ११.५ ओभरमा अल आउट हुँदै मात्र ४५ रन समेटियो । वेस्ट इन्डिजले टी२० क्रिकेटमा इतिहासमै बनाएको सबैभन्दा कम तथा टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा दोस्रो कम योगफल हो । सबैभन्दा कम नेदरल्यान्ड ३९ र तेस्रो स्थानमा नेपाल ५३ रनमा अलआउट भएको रेकर्ड छ ।
वेस्ट इन्डिजका लागि शिम्रण हिटमर र कार्लोस बर्थवेटले समान १० रन जोड्न बाहेक अन्य कुनै पनि ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन् । ७ ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंकमा रन जोड्न नसक्दा २ डक आउट भए । इंग्ल्यान्डलाई फराकिलो जित दिलाउन क्रिस जोर्डनले २ ओभरमा ६ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । त्यस्तै आदिल राशिद, लियाम प्लंकेट र डेविड विल्लीले समान दुई विकेट लिए ।
त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङ थालेको इंग्ल्यान्डले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाउँदै १ सय ८२ रन बनायो । इंग्ल्यान्डलाई विशाल योगफल तयार पार्न युवा खेलाडी साम बिलिङ्ग्सले विश्फोटक ब्याटिङ गर्दै ४७ बलमा १० चौका र ३ छक्का प्रहार गर्दै ८७ रनको योगदान दिए । बिलिङ्ग्स म्यान अफ द म्याच पनि चुनिए ।
त्यस्तै जो रुटले ५५, जोनी बस्टो १२,डेविड विल्ली १३ र एलेक्स हेल्स ८ रन जोडे । वेस्ट इन्डिजको लागि फेबियन ऐलीन २ विकेट लिए । जितसँगै इंग्ल्यान्डले तीन टि २० श्रृंखला २-० ले एक खेल अगावै जितेको छ । पहिलो खेलमा इंग्ल्यान्ड ४ विकेटले विजयी रहेको थियो । अन्तिम खेल ११ मार्चमा हुने छ ।